A-2 ~ Ulo abuo abuo mebiri emebi…
A-3 ~ Wide Arch Ruben Wide ...
A-4 ~ Spool Type rober Expa…
Ngwa ahia otu aka nwere ike belata ujo na uda, nke nwekwara ike dozie nsogbu axial / anterial / angular mmebi / eccentric. Enwegharị njikọ ọzọ nke ọkpọkọ site na ụdọ naịlọn na nsọtụ abụọ ya site na mgbanaka waya siri ike. A na-anyụpu flanges steel nke DIN, ANSI, BS, JIS na ụkpụrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na nrụgide dị elu nke ukwuu, a ga-akpọkọta bolts ndị agbakwunyere yana flanges.
A-9 ~ Ngwaahịa ndị ọzọ
Rịba roba nwere nguzogide mmanụ, nguzogide acid na alkali, nguzogide na nke iguzogide okpomoku, iguzogide nká na ihe ndi ozo. Dabere na ebumnuche dịgasị iche, ihe eji eme roba dị iche. Anyị nwere ike ịme gaskets na EPDM, Buna, roba eke. Ọ bụrụ na ihe eji achọ ihe pụrụ iche, anyị nwere ike mezuo ihe ndị a chọrọ.
A na-ezukọta kọlọsị na flanges mating, ya na ụkpụrụ dị iche iche na nrụgide dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ndị na-azụ ahịa chọrọ ka anyị zụta ha, wee jikọtara ya na nkwonkwo rọba.
Rubber Pipe bụ ihe eji emechi akụ na ụba na-agbanwe agbanwe maka nchara na nkedo ígwè, ma ogologo ya ogologo ma ọ bụ ebe achọrọ radius chọrọ. Enwere ike iji B-1 Rubber Pipe mee ihe na-ebubata ọla, kemịkalụ mmiri, ájá, na slururi ndị ọzọ.
A na-eji njikọ otu emekọ ihe mgbe ọ dị mkpa ijikọ akụ na ụba, akụkụ nke njikọ a na-enweta ma na-ekpo ọkụ ma na-etinye ọkụ. Akụkụ abụọ a ka enyere eriri igwe nwere ike ịpụ nchara na BS ma ọ bụ ANSI.
A na-akpụzi ụdị nkwonkwo rọba ahụ, a na-eme ka olu olu ya sie ike n'olu. The ST stype na-eji mgbanaka na-ejide ọkụ iji kwado flange. STF juputara n'igwe ogugu, na 50% nke ST na - emeghari mmeghari, mana o nwere oge opupu ihe ubi 4 ugboro karịa oghere achọrọ.
Usoro dị obosara bụ nkwonkwo mgbasa ahụ a na-akpụzi, yana ihe na-enweghị mgbagha ma na-enweghị nkwalite ọla na olu nke ahụ. Akụkụ sara mbara na-enye ohere mmeghari ka ukwuu na ọnụego mmiri dị ala na-atụnyere ụdị spool. A na-eji WA na WAF mee nkwonkwo agbakwụnye okirikiri akụ na ụba. WAF juru eju, yana 50% nke ngagharị WA kwere, mana o nwere ọnụego oge opupu ihe ubi 4 ugboro karịa obosara sara mbara.
A na-eji ngwaahịa abụọ-akụ abụọ ebe ọ bụla achọrọ mmeghari ọzọ. Ọ bụrụ na nrụgide dị elu nke ukwuu, a ga-akpọkọta bolts ndị agbakwunyere yana flanges. Enwegharị njikọ ọzọ nke ọkpọkọ site na ụdọ naịlọn na nsọtụ abụọ ya site na mgbanaka waya siri ike. A na-anyụpu flanges steel nke DIN, ANSI, BS, JIS na ụkpụrụ ndị ọzọ.